खोप सेवा एक महिनापछि शुरु हुने- जानकारीको लागि सबै आमा बुवालाई शेयर गरौँ ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/खोप सेवा एक महिनापछि शुरु हुने- जानकारीको लागि सबै आमा बुवालाई शेयर गरौँ !
खोप सेवा एक महिनापछि शुरु हुने- जानकारीको लागि सबै आमा बुवालाई शेयर गरौँ !
विश्वव्यापी म’हामारीका रूपमा फैलिएको को’रोना भा’इरस रोकथामका लागि सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीका कारण स्थगन खोप सेवा म्याग्दीमा एक महिनापछि शुरु भएको छ । बन्दाबन्दीमा सामाजिक दूरी भ’ङ्ग हुने भएकाले स’ङ्क्र’मणको सम्भावित जो’खिम रोक्न खोप स्थगन गरिएकामा म्याग्दीमा वैशाख १२ गतेदेखि खोप कार्यक्रम शुरु भएको हो। ‘बेनी अस्पतालमा हरेक महिनाको ४, १२, २० र २७ गते खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । गाउँपालिकाहरुमा प्रत्येक महिनाको १ देखि १० गतेभित्र खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने समयतालिका छ। स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख एकनारायण लम्सालले सरकारको पछिल्लो निर्णयानुसार नियमित खोप सेवा शुरु भएको जानकारी दिनुभयो।
बेनी अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाले नियमित समयतालिकाअनुसार खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। दादुरा-रुवेलाविरुद्धको खोप कार्यक्रमसमेत स्थगन भएको थियो। धवलागिरि, मङ्गला र मालिका गाउँपालिकामा दादुरा-रुवेला खोप अभियान सकिएको छ । बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बन्दाबन्दी सकिएपछि खोप अभियान चलाइने स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख लम्सालले बताउनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालै जारी गरेको कोभिड-१९ को महामारीको समयमा नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मार्गदर्शनअनुसार म्याग्दीका ४५ वटै वडामा खोप कार्यक्रम शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। म्याग्दीमा दुई वर्षमुनिका करिब पाँच हजार बालबालिका नियमित खोप कार्यक्रममा आबद्ध रहेको बताइन्छ। बालबालिकालाई जन्मेदेखि १५ महिनाको अवधिमा सातपटक विभिन्न ११ रो’गवि’रुद्ध खोप दिइन्छ।
खोप दिँदा भौतिक दूरी कायम गर्ने, बच्चालाई खोप दिन नहुने अवस्थाको पहिचान गर्ने, खोप दिने स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षा अवलम्बन गर्ने तथा लक्षित सबै बालबालिकालाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्ने मार्गदर्शन जारी भएको छ।
बलात्कार आरोपमा गौशालाका एक जना प्रहरी पक्राउ
आज मिति २०७७ साल कार्तिक २६ गते बुधबार पशुपतिनाथको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस्